Ukuze umelane umzimba imoto abanikazi imoto ukhethe izinto izinga, esekelwe izincomo kanye nezeluleko ochwepheshe. Imisebenzi esemqoka a ezipholisha nokunamathisela ezinhle - lokuvikeleka kwezifiso ezisemqoka ezingumphumela umzimba imoto, washukashukana imihuzuko nezinye ukukhubazeka ku paintwork.
Phakathi izimonyo yezimoto ukwehluka ezibhekwa ezinye zezindawo ezingcono kakhulu sula 3M brand. Iningi imisebenzi okuhloswe ngaso ekubuyiseleni emzimbeni izimoto ezenziwe usebenzisa 3M ezipholisha.
Sha inikeza anhlobonhlobo polishes. Ukuhlola ukuthi yimaphi ama umuntu ngaziphi izinjongo kuyinto ngempela nzima saqala. Empeleni, konke ulula: ku imiyalo ku-3M ezipholisha, kukhona incazelo enemininingwane. Ukuze wokucwebezelisa paintwork wemoto nhlobonhlobo izingoma futhi Izingxube ingasetshenziswa, kodwa iningi labo basonta isigaba professional.
Intengo polishes 3M - enye inzuzo babo, ikakhulu uma sithatha ukuqhathanise izindleko Ukwakheka efanayo. Zonke izinto anikezwa yokukhiqiza inkampani 3M, kukhona of high kanye nezici kakhulu ezokuphepha.
isakhiwo Advanced phakathi yezimoto yezimonyo ezipholisha nokunamathisela kuyinto 3M yasekuqaleni, okuyinto kubhekwa omunye ethandwa kakhulu phakathi izinto amateur nezobuchwepheshe. On umbuzo zingaki ngempela izinto eziphilayo kukhona polishes 3M, kunzima ukuphendula: Inkampani waziphatha womshini imikhiqizo enjalo amashumi eminyaka, ekuthuthukiseni izinto ezazikhona kanye nokwenza ngcono izinga labo.
kusukela umkhiqizo line 3M ihlanganisa ezihlukahlukene compounds ngamanani ahlukene. Ngokwesibonelo, 3M ezipholisha ngesisindo akubizi - abangaba yinkulungwane ruble ilitha. kumakhophi Professional brand efanayo hhayi kuphela ngcono ukusebenza, kodwa futhi intengo: inani eliphansi ruble 9000.
Umenzi inikeza anhlobonhlobo polishes, okubandakanya:
Usizo lwabenza imisenenzi nokunamathisela olwalwenza kakhulu. Kusetshenziswe ukususa elingenhla ungqimba upende. Ububanzi yakhiwa izinhlobo eziningana ayinhlama for imisebenzi ehlukene.
Tonkoabrazivnye unama. Zisetshenziswa ukuqeda ukukhubazeka ezincane.
Universal, isibonelo, wax zokuzivikela 3M 1L 09 377 4. izingoma ezinjalo sihlanganise property ayinhlama eziningana wokucwebezelisa ezisetshenziswa ompetha imisebenzi eziyinkimbinkimbi.
Non-olwalwenza ukwakhiwa wax ezisekelwe. Wokucwebezelisa unamathisele, bhunga imoto enamathela of ukubukeka ekhangayo.
namathisela Specific, isibonelo, izingoma for wokucwebezelisa matt upende ezinengilazi noma izibani zemoto. Izindleko ezipholisha ezifana izikhathi eziningana kunakunoma yezinye izinhlobo.
Ngingalutholaphi ukuthenga polishes
3M polishes ekhethekile edayiswa ezitolo yezimoto okukhethekile. Futhi unamathisele zingatholakala ezitolo inthanethi. I izingoma zilethwa kokubili abameleli ezisemthethweni futhi elizibekela. Kuze kube manje, kulula futhi ethengekayo ukuthenga polishes phezu Internet kuka ukuthenga ezitolo.
Ikhwalithi kanye yasekuqaleni ezipholisha ayinhlama ukuthenga kunzima kakhulu: in the uhla imikhiqizo emashalofini ezitolo imoto zingatholakala ukwakhiwa inkohliso. Uma ukuthenga sula 39030 3M Ukusebenza Qeda nezinye engcono uxhumane nomthengisi yakho egunyaziwe noma oda kuwebhusayithi kwabakhiqizi.
Kufanele futhi usho yokuthi kwemikhiqizo yekhwalithi ephezulu professional zivame singamelwe izinhlu izitolo yezimoto ezivamile. Labo polishes, okuyizinto Ochwepheshe kumasevisi imoto, ukuba yayala kusuka wabenza ogunyazwe, abahlinzeki noma umkhiqizi oqondile.
Indlela ukukhetha sula?
I impendulo mayelana 3M wokucwebezelisa abanikazi imoto bathi kuyodingeka ukuthola hhayi kuphela nokunamathisela ezipholisha, kodwa futhi izindlela ezengeziwe ngokufaka isicelo futhi bezihlikihla kokuqanjiwe. isixazululo Universal ke uba 3M Fast Sika Plus. Abashayeli bathi unama kufanelekile ezinengilazi esithambile futhi kanzima futhi izingxenye nge substrate non-metallic.
Ukusetshenziswa kwalezi polishers uyakuba necala ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama:
Wokucwebezelisa nokunamathisela edayiswa amaphakheji ngesivalo oluhlaza.
Ukuze polishes usebenzisa 3M brand imibuthano amakhodi 50587 futhi 50487. Kungenjalo, umphumela wokugcina kungenzeka kungabi nqampuna umhlabeleli.
On the isembozo nokunamathisela komkhawulo ocacisiwe ukusetshenziswa kwaso, ukuthi kufanele ufunde ngaphambi kokuthenga.
kunenzuzo Nokho ngaphezulu Izindleko nokunamathisela kuyahlukahluka kuye ngenani, ukuthola isakhiwo izikhwebu nge izinto ezengeziwe.
Sebenzisa nokunamathisela for wokucwebezelisa izibani kanye nezinye izingxenye zomzimba ngaphandle hhayi Kunconywa.
Iziqondiso kuya polishes ukulinganiselwa efakwe ohlwini nemibandela ngaphansi lapho Ukwakheka is hhayi Kunconywa. Uma ukugxambukela ukuwafeza wonke umsebenzi odingekayo, kungcono ukuthenga unama ofanelekayo. inkampani yokukhiqiza 3M unikeza anhlobonhlobo izimonyo yezimoto. Ayinhlama 3M kuphela zingezinye zezibhedlela ezihamba emakethe Russian futhi ezidume phakathi abanikazi imoto. Ngokuya izinga, lezi polishes ukundlula analogue abaningi bezinye izizwe.
3M car body wokucwebezelisa ayinhlama ngezigaba eziningana:
I engenhla ungqimba upende ifilimu kancane isuswe esebenzisa wokucwebezelisa nokunamathisela nge okuncane athile.
Ukusetshenziswa laqanjwa ekhethekile olwalwenza ikuvumela ukuba abuyise bucwebezele komzimba yemoto.
Wokucwebezelisa usebenzisa umuthi wokuxubha non-olwalwenza - it ususa ukukhubazeka kulencane nokubuyiselwa kukhanye.
Ukusetshenziswa ekwakhiweni ekhethekile zokuzivikela ivikela upende kusukela ukuvezwa ezahlukene bese igcina ukukhanya umbala.
Umzimba imoto iphathwa polishes kusukela 3M ngezigaba ezintathu, olokuqala okuyinto isicelo unama olwalwenza kakhulu. Inqubo wenziwa ngendlela elandelayo:
Uma uyikha phezulu le umzimba sisetshenziswa esincane nokunamathisela athile. Uma umsebenzi isetshenziswa amathuluzi akhethekile, ithuluzi sisetshenziswa ngqo buff.
Yonke ezipholisha wenziwa kuphela ngokunyakaza isiyingi. Njengoba nokunamathisela olwalwenza ngaphezulu yakhelwe ukuqeda zikhubazeke futhi ahlelembe kwamanzi, ulindele ukubona ukukhanya futhi zikhanyise akudingekile: zonke olubushelelezi elilinganiselwe upende.
Umzimba imoto lula zibukeke wahlukaniswa ngamaqembu amagatsha amaningana. Ongoti ukusebenza imisebenzi enjalo, isibonelo, ukwabelana hood imoto esishintshashintshayo eziyisithupha ehlukile.
I isivinini ukujikeleza kwesondo ezipholisha kumele singeqi 900-1500 ngomzuzu. Ngokwesilinganiso, esigabeni ngasinye icutshungulwe 3-4 imizuzu.
Asikwazi ukuvumela okweqile the paintwork - ke kufanele lizwakale linemfudumalo, kodwa hhayi ashisayo.
Inzuzo encishisiwe umshini emsebenzini phezu izingxenye ephakanyiswe zomzimba.
I unama phezu umzimba akahlale uhlobo ifilimu ezondile ukukhanya.
isigaba sesibili - wokucwebezelisa i umzimba imoto usebenzisa unamathisele, kancane tapered, onikeza ayebuthaka futhi kukhanye we ebusweni:
Ukuze usebenze, a ekhethekile Foam zenjoloba cap.
Pasta e esincane Foam sisetshenziswa embuthanweni, bese uqhubekela phambili wokucwebezelisa umzimba. Zone ebusweni akudingekile, ngoba ngesikhathi imisebenzi enjalo it is hhayi ukufuthelana.
Ezipholisha kuqedwa emva isicwebezelisi Kwamanzi enamathiselwe.
Isigaba sokugcina - isicelo ebusweni umzimba Ukwakheka ekhethekile zokuzivikela. 3M nomkhiqizi ukhiqiza unama ekhethekile zokuzivikela ivikela paintwork yomzimba ekulimaleni futhi elondoloza akhanye futhi ukukhanya umbala emzimbeni.
Ukuze uthole amanye amathiphu wokucwebezelisa
Wokucwebezelisa imoto akhethiwe izinga polishes, asikwazanga lokulimaza abalulekile emzimbeni futhi paintwork. Kule ndaba, ochwepheshe batusa ukuba uthole unama elilodwa umkhiqizi nokukodwa uchungechunge - uyonikwa okufanayo izinga okusezingeni umphumela.
Lapho ekhetha sula efiselekayo acabangele ezicashile okulandelayo:
Zonke ayinhlama wokucwebezelisa amazinga ahlukene abrasiveness. Ingxenye olwalwenza kungaba micro, emihle, medium and enkulu, futhi ukukhethwa incike umzimba ukukhubazeka ethile: zingabantu lubonakale ezingaphezu kuka, le olwalwenza emikhulu edingekayo ukuze uwasuse.
Zonke ayinhlama oluqanjwe 3M, kukhona jikelele futhi ingasetshenziswa kokubili ngesandla futhi usebenzisa umshini ezipholisha. Naphezu kwakho konke lokhu, kuyatuseka ukuba ukhethe sula, afaneleka indlela ethile yomsebenzi, hhayi jikelele.
Inkampani 3M - omunye abakhiqizi engcono yezimoto izimonyo ukunakekelwa paintwork. Wokucwebezelisa - yezindlela eziphumelela kakhulu imikhiqizo ukunakekelwa surface body ukuthi hhayi kuphela ukuhlangabezana nezidingo izinga nokubaluleka, kodwa sivumele ukuthola umphumela omuhle. Pasta lusenza ngisho ukuqeda zinokukhubazeka okungathi sína ka paintwork futhi ususe imihuzuko lubonakale wabuya umzimba isicwebezelisi kanye ukubukeka ekhangayo.
Ezipholisha 3M ayatholakala amaphakheji elula nge ezinikeza iziqondiso. Ngo kits athile wokucwebezelisa umzimba iqukethe wonke izakhiwo ezidingekayo ukuze kusheshe handling imoto ebusweni. Ngaphezu wokucwebezelisa ayinhlama nezinye ukwakhiwa nomkhiqizi inikeza uhlu olubanzi kanye nemishini ekhethekile nezinamathiselo for wokucwebezelisa imishini. Ukuze ukukhethwa izinto efanelekayo ungaxhumana umthengisi ogunyaziwe noma nomkhiqizi ukuze uthole usizo. Zonke polishes ethulwa lwemibhalo ehlukile.
Ukuzilibazisa Kuhle ku koNyaka Omusha: yokulinganisela uhlu, incazelo kanye nokubuyekeza
Nina Hagen - ummeli wesifazane we-punk
Kuyini yena, umuntu ophelele? Wake wayisebenzisa yini ikhampasi, yini izici kufanele ukuba umuntu ophelele